Mamorona milina arcade anao manokana miaraka amin'ny Raspberry Pi | Fitaovana maimaim-poana
Betsaka amintsika no ireo izay miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana tsy dia mahaliana intsony ny milalao lohateny sy lalao sasany izay nanam-bintana niainana tamin'ny fahazazantsika. Angamba ary noho io tsy mahagaga raha mitady, araka izay tratra, hamorona milina arcade antsika manokana isika izay iainana indray, amin'ny lafiny iray, ireo zavatra niainana taloha.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina ary lavitra ny famokarana milina matihanina tanteraka, zavatra iray izay tsotra kokoa noho ny mety ho eritreretinao hatramin'ny androany eny an-tsena dia misy kitapo maro izay efa manolotra anao, hiantsoana azy amin'ny fomba sasany, ny fanaka hanombohana azy, keypads ary na dia ny fametrahana tanteraka ny efijery sy ny fitaovana aza, Androany dia hanazava aminao aho fa tsy mila Raspberry Pi fotsiny izahay miaraka amina fanaingoana manokana hahafahantsika mampiasa azy amin'izany.
1 Inona no ilaintsika mba hahafahantsika milalao ny lalao ankafizintsika?
2 Misintona sy mametraka RetroPie amin'ny Raspberry Pi izahay
3 Mametraka RetroPie amin'ny Raspberry Pi anao
4 Amboary RetroPie amin'ny Raspberry Pi
Inona no ilaintsika mba hahafahantsika milalao ny lalao ankafizintsika?
Amin'ny fomba tena tsotra sy hahafahantsika milalao amin'ny karazana efijery dia mila singa samihafa isika izay, tsikelikely, dia hanondro ny fomba hirosoana amin'ny fametrahana azy ireo. Raha vonona ny hanova ny Rasbperry Pi ho lasa console ianao dia izao no ilainao:
Fifandraisana amin'ny Internet, afaka amin'ny alàlan'ny LAN na WiFi
Controle console lalao
Ho fanehoan-kevitra amin'ity teboka ity, dia tokony homarihina fa, rehefa tafapetraka ny rindrambaiko rehetra ary afaka mihazakazaka tsara ny zava-drehetra isika, dia afaka manomboka mieritreritra ny famoronana vokatra mandroso kokoa izay ilaintsika mba mila karazana singa hafa toy ny kit ho amboary ny fanaka. manome sary matihanina kokoa, eny an-tsena dia misy safidy maro, ary ampitaovana azy miaraka amin'ny keypad, efijery ...
Amboary ho mpizara tranonkala ny Raspberry Pi anao
Misintona sy mametraka RetroPie amin'ny Raspberry Pi izahay
Mba hahatratrarana an'io tanjona faratampony io dia ny fahafahantsika mankafy ny lalaovintsika amin'ny efijery rehetra, ary na dia sahintsika aza ny manao arcade antsika manokana, angamba ny filokana mahaliana indrindra dia ny apetraho ny rafitra fiasa RetroPie ao amin'ny Raspberry Pi anay. Amin'ny ankapobeny dia miresaka momba ny kinova Raspbian iray izay, raha tsy izany, dia misy interface iray namboarina tanteraka izay ahafahantsika mandefa ireo emulator isan-karazany hampidirana ireo lalao Retro.
Ny RetroPie dia tsy mitovy amin'ny sisa amin'ireo safidy eny an-tsena amin'ny alàlan'ny fahafaha-manamboatra azy isan-karazany, ny fahamendrehan'ny interface sy ny fampiasana emulator loharano misokatra, zavatra izay mahatonga amin'ny farany Izay mpandraharaha liana rehetra dia afaka miara-miasa amin'ny fivoaran'ny rindrambaiko miaraka amina kaody vaovao sy amin'ny fanaovana tatitra sy fanitsiana izay lesoka hita. izany dia ahitsin'ny fokonolona ao anatin'ny fotoana fohy.
Tetikasa 3 miaraka amin'ny RGB Led sy Arduino
Amin'io fotoana io dia tsy maintsy raisintsika zavatra manan-danja indrindra ary izany dia, na dia mamela anao haka tahaka ny consoles isan-karazany aza ny RetroPie, ny marina dia miankina amin'ny Raspberry Pi nampiasantsika dia afaka milalao lalao na hafa isika. Ohatra iray mazava ny hoe raha manokana Raspberry Pi 1 isika hanatanterahana izany, dia tsy ho afaka hilalao safidy toa ny Play Station 1 na Nintendo 64 isika, safidy roa izay farafaharatsiny mba mila safidy matanjaka kokoa toa ny Raspberry. Pi 2 na 3. Ity no lisitry ny console izay azonao alaina tahaka amin'ity rindrambaiko ity:
Lalao Boy Advance
Rafitra fialamboly Super Nintendo
Sega Mega Drive / Genesisy
Ary farany, marihina fa ny RetroPie, misaotra indrindra ny vondron'olona mpandrindra ao ambadiky ny tetikasa, dia anio mifanaraka amin'ny mpanara-maso maro an'isa nefa tsy mila mametraka rindrambaiko fanampiny. Manana ohatra iray amin'ny mpanara-maso mifanentana izahay amin'izay ahafahantsika mampiasa ny Controller Play Station 3 na Xbox 360.
Mametraka RetroPie amin'ny Raspberry Pi anao
Vantany vao vonona ny fitaovana rehetra, tonga ny fotoana hanombohana mametraka RetroPie amin'ny Raspberry Pi anao. Amin'izao fotoana izao dia misy safidy roa samy hafa tanteraka izay azontsika safidiana ary manome antsika ny valiny farany.
Voalohany indrindra azontsika atao apetraho ny emulator mampiasa sary RetroPie miaraka amina Raspbian OS. Izaho manokana dia mieritreritra fa ity no fomba tsotra indrindra satria tsy mila mampidina sary RetroPie fotsiny avy amin'ny tranokala ofisialin'ny tetikasa izahay. Ny lafy ratsy dia, amin'ity fomba ity, ny fametrahana dia hamafa ny atin'ny microSD ampiasainay rehetra.
Safidy faharoa no handeha araraoty ny fametrahana Raspbian taloha fa mety efa napetrakao amin'ny Raspberry Pi anao. Amin'ity sary ity dia tsy mila mametraka ny emulator RetroPie fotsiny isika. Amin'ity fomba tsotra ity dia tsy hahafoana rakitra izay mety efa namboarinay manokana tamin'ny kapila kapila na microSD-tsika.
Raha nisafidy an'ity safidy voalohany ity ianao dia teneno fotsiny ny tenanao fa, mba hisintomana ny sary RetroPie dia tsy maintsy miditra amin'ny menio fampidinana izay misy ao amin'ny tranonkalan'ilay tetikasa ianao. Raha vantany vao feno ny varavarankely dia tsy maintsy mifidy ny kinova Raspberry Pi fotsiny isika ary tsindrio amin'ny fampidinana. Mavesatra be ilay tetik'asa ka maharitra ela ny fisintomana an'ity sary ity, mandritra ny 5 minitra ny fifandraisana haingam-pandeha.
Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mamindra ny atin'ny sary RetroPie amin'ny karatra microSD izahay. Ho an'ity, tanteraho ity hetsika ity Izaho manokana dia mampiasa ny rindrambaiko Etcher satria mora kokoa noho ny manampy ny sary amin'ny karatra amin'ny fampiasana ny tsipika baiko na dia mpampiasa mandroso aza ianao dia azo antoka fa mifehy tsara ny iray amin'ireo safidy roa ianao. Ity teboka ity ao anaty ny fizotrany, na fomba iray na hafa, matetika dia maharitra 10 minitra. Vantany vao vita io dingana io dia mila mampifandray ny Raspberry Pi fotsiny isika mba hizaha toetra fa vita tsara ny fametrahana.
Raha efa nanana fametrahana Raspbian napetraka ao amin'ny Raspberry Pi ianao dia tsy hametraka azy io fotsiny ny emulator RetroPie. Mba hanaovana izany, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mametraka ny fonosana git. Ity fonosana ity dia matetika apetraka amin'ny toerana misy anao fa, raha tsy manana izany isika dia mila miditra fotsiny ireto baiko manaraka ireto.
Raha vantany vao tafapetraka sy havaozina ireo fonosana rehetra dia tsy maintsy ampidirintsika ireto baiko manaraka ireto izay hametraka ny emulator amin'ny kinova Raspbian.
Rehefa manatanteraka ny torolàlana farany isika dia tokony hahita sary iray mitovy amin'ilay ilaozako anao eo ambanin'ireto andalana ireto. Ao aminy, araka ny hitanao, tsy mila manondro fotsiny isika fa ny fametrahana fototra dia tontosa. Ity dingana ity dia afaka maharitra minitra maromaro. Vantany vao vita ny fametrahana dia tsy maintsy averintsika indray ny rafitra miasa.
Amboary RetroPie amin'ny Raspberry Pi
Amin'izao fotoana izao dia efa nahavita nametraka ny emulator isika, na amin'ny fomba roa na amin'ny roa, tsy maintsy miroso amin'ny fikirakirana ny fitaovana sasany izay hanampy antsika hanatsara bebe kokoa ny traikefan'ny mpampiasa ary koa ny fanaraha-maso hahafahana milalao.
Ny fitaovana voalohany tokony hamboarintsika dia Samba. Ity rindrambaiko ity dia ho iray, rehefa tonga ny fotoana, dia hahafahantsika mifandray amin'ny Raspberry Pi antsika amin'ny solosaina hafa hahafahana manampy ireo lalao. Mba hanatanterahana an'io asa io dia tsy hiditra amin'ny RetroPie Setup fotsiny isika. Ao amin'ny varavarankely manaraka, kitiho fotsiny ny safidy Configure Samba ROM Shares
Ity dingana ity dia mety maharitra minitra vitsy, fa, rehefa vita, Azontsika atao izao ny miditra amin'ny Raspberry Pi antsika amin'ny PC rehetra izay mifandray amin'ilay tambajotra iray ihany. Ho an'ity, ao anaty fampirimana, eo amin'ny bara adiresy, dia manoratra ny IP an'ny Raspberry Pi izahay, raha hainay izany, na ny baiko // RASPBERRYPI.
Amin'izao fotoana izao, farany, manana ny emulator RetroPie voalamina ao amin'ny motherboard ary indrindra indrindra, ny fidirana aminy avy amin'ny PC hafa. ankehitriny ny hany mila ataontsika dia ny mitady amin'ny Internet pejy iray ahafahantsika misintona ny lalao tiantsika hapetraka.
Raha vantany vao manana ny lalao tianay hapetraka amin'ny console lalao iray izahay, miditra amin'ny alàlan'ny Samba mankany amin'ny lahatahiry ny console lalao voalaza izahay ary manampy ny lalao. Raha vantany vao nopotsirina tao anaty fampirimana mifanaraka aminy ny lalao dia mila averintsika fotsiny ny Raspberry Pi mba hahitantsika azy ary hahafahantsika manomboka milalao.
Ho antsipiriany farany, lazao aminao fa raha mampiasa ny iray amin'ireo kinova farany an'ny RetroPie miaraka amin'ny filaminana tanteraka izahay dia tsy mila mametraka ny fanaraha-maso satria ny rafitra miasa dia efa misy mpamily ilaina mba hahitan'ny console azy ireo. Mila mampifandray azy ireo fotsiny isika ary mamerina ny tabilao. Teboka iray hafa tokony hotadidina, Raha te-hilalao amin'ny fomba misimisy kokoa isika dia mandehana mamaky ny overclocking ny motherboard. Noho izany dia miditra amin'ny menio raspi-config izahay. Mba hanatanterahana izany fikirakirana izany, tsy voatery atao tanteraka dia tsy maintsy manoratra amin'ny Terminal isika:
Rehefa vita io baiko io dia tokony hiseho ny varavarankely izay hisafidianantsika ny safidy 'overclock'ary, amin'ity vaovao ity, ny safidy Medium 900 MHz.
Araka ny nolazaiko, ity configurement farany ity dia tsy voatery atao ary tokony handinika zavatra maromaro ianao hatrizay, tahaka ny handehanan'ilay interface tsara, terenay ny processeur ka hihafana izy io, zavatra mety hahatonga azy hiafara raha mihena raha tsy mampiasa heatsinks mahavita mampihena ny mari-pana tohanan'ny mpankafy isika.
More Information: programoergosum
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Raspberry Pi » Mamorona milina arcade anao miaraka amin'ny Raspberry Pi
Arduino Yún, solaitrabe hiditra malalaka amin'ny Internet of Things